Robot Teapresso Shop Mpanamboatra sy Orinasa Fitaovana mandeha ho azy tsara indrindra | Moton
Dite ronono robot lamaody vaovao ...
Fitaovana mandeha ho azy tanteraka R...
Lafo sy fomba mora...
Robot barista kiosk kafe ...
Robot barista tafiditra amin'ny asa...
Fivarotana Teapresso Robot Fitaovana mandeha ho azy tanteraka
Robot teapresso shop MTD021A dia natao ho karazana misokatra ho an'ny sehatra fampiharana anatiny toy ny fivarotana dite nentim-paharazana. Afaka manamboatra dite sinoa vaovao ao anatin'ny 20 segondra. Ny dingana dia mifototra amin'ny teknolojia fitrandrahana vaovao izay mitovy amin'ny teknolojia fitrandrahana kafe tandrefana. Ny tsirony dia mitovy amin'ny dite vita amin'ny fomba fanaovana dite nentim-paharazana. Ny famenoana fitaovana dia mora raisina amin'ny fotoana rehetra dia miankina amin'ny tena fanjifana. Ny dingana rehetra amin'ny fanaovana dite dia mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny sandry robot miara-miasa.
Laharana modely: MTD021A
Robot teapresso fivarotana MTD021A dia tena fitaovana amin'ny malaza an-trano fiaraha-miasa robot sandry, teapresso milina, dite ravina grinder. Ilaina ny rano amin'ny paompy sy ny fanarian-drano. Ny famenoana fitaovana dia azo atao amin'ny fotoana rehetra, izay miankina amin'ny tena fanjifana eny an-toerana.
Ny fiasan'ny fivarotana teapresso robot MTD021A
• Famandrihana ecran fikasihana eny an-toerana.
• Ny fanaovana dite karakarain'ny sandry robot miara-miasa ho azy.
• Fifandraisana amin'ny fahitana ao anatin'izany ny hazavana sy ny ecran touchy.
• Teapresso fivarotana fitaovana anatiny sata fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy sy fanairana fahadisoana.
• rafitra fitantanana fototra mifototra amin'ny Android.
• Fampahatsiahivana fampahatsiahivana ara-nofo sy fampahatsiahivana ara-nofo voalanjalanja
• Famakafakana sy fanondranana ny angona momba ny fanjifana
• Fitantanana mpampiasa sy fitantanana baiko.
• Wechat mandoa sy Alipay
Parameter amin'ny toeram-piantsonana ivelan'ny trano fisotroana dite ronono robot
Zintin'aratra 220V 1AC 50Hz
Hery napetraka 10kw
refy (WxHxD) 1800x1500x1500mm
tontolo iainana fampiharana an-trano
Fotoana fanaovana fisotroana antonony 50 segondra
Kaopy ambony indrindra (indray mandeha amin'ny sakafo) 100 kaopy
Fomba fandoavam-bola WeChat mandoa ary Ali mandoa
● Fiasa tsy misy olona
● Vidin'ny fikojakojana ambany
● Vidin'ny asa mora
● Fametrahana moramora
● Fametrahana sy famindran-toerana mora
● Toe-javatra maro azo ampiharina
● tsiron-dite maromaro
● Faritra kely voapetraka
teo aloha: Kiosk Dite Ronono-damaody vaovao ho an'ny sehatra fampiharana an-trano
Manaraka: Robot Receptionist amin'ny lamaody sy mora
Mifantoha amin'ny fanomezana vahaolana automatique robotika.
Kiosk Dite Ronono lamaody vaovao ho an'ny fampiharana anatiny ...
Toeram-piantsonan'ny robot milk tea outdoor station